कारबाहीमा परेका इन्स्पेक्टर कुशवाह पशुपतिनगर हेटौंडाको इन्चार्ज ! — Bhugolnews
कारबाहीमा परेका इन्स्पेक्टर कुशवाह पशुपतिनगर हेटौंडाको इन्चार्ज !
मकवानपुर । कारबाहीमा परेका एक प्रहरी अधिकृतलाई आकर्षक स्थानमा सरुवा गरेका फेला परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाही गरेको प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत हेटौंडाको इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरको इन्चार्च बनाइएको हो ।
संगठनको आचरण र मर्यादा विपरित काम गरेको आरोपमा नसियत भोगेपनि आकर्षक स्थानको इन्चार्ज पाउने इन्स्पेक्टर अरुण कुशवाह हुन् । धनुषास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, सखुवा, महेन्द्रनगरमा रहँदा कुशवाहले २०७५ मंसिर ११ मा नसियत पाएका थिए ।
जिल्लाबाट अनुगमनमा खटिएको टोलीसँग दुर्व्यवहार र सही ढंगले कार्यसम्पादन नगरेको आरोपमा उनीमाथि कारबाही भएको थियो । संगठनको आचरण र मर्यादा विपरित काम गरेको आरोपमा नसियत दिइएलगत्तै उनलाई काजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ओखलढुंगा पठाइएको थियो । तर, उनी अटेर गरेर प्रहरी मुख्यालयमै हाजिर गरेर बस्दै आएका थिए ।
उनैलाई पुरस्कृत गर्दै आकर्षक स्थानमा पठाइएको भन्दै प्रहरी अधिकृतहरु नै असन्तुष्ट छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठको जोडबलमा कुशवाहलाई पशुपतिनगरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको इञ्चार्ज दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरले उनि झण्डै एकमहिना देखि पशुपति नगरको इन्चार्जका रुपमा कार्यरत् रहेका छन् । पशुपतिनगरका इन्चार्जले अनिवार्य अवकाश पाएपछि त्यहाँको दरबन्दी खाली थियो । इप्रका पशुपतिनगरको कार्यक्षेत्रमा हेटौंडा औधोगिक क्षेत्र पनि पर्दछ ।
इन्स्पेक्टर कुशवाहको गलत आचारको रेकर्ड नै रेकर्ड रहेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । संगठनको मर्यादा विपरीत काम गर्ने कुशवाहलार्ई आकर्षक स्थानमा पठाएको भन्दै प्रहरी अधिकृतको असन्तुष्टि छ । राम्रा काम गर्नेलाई पाखा लगाएर गलत भएपनि हाम्रालाई काखी च्याप्ने काम भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।
‘हामीले भनेर हुँदैन तर पशुपतिनगरमा गलत प्रहरी अधिकृतलाई पठाइएको छ । यसले राम्रो सन्देश जादैन ।’–एक प्रहरी अधिकृतले भने ।